नजिक न्युज | प्रेमीलाई समय दिन नपाएपछि युवतीले खोजिदिइन् नयाँ गर्लफ्रेन्ड
आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डको खुसीका लागि आफैले नयाँ गर्लफ्रेन्ड खोजीदिने युवती पनि यो दुनियाँमा छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्दछ । किनकि जो कोही प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेम बाँडिएको सहन सक्दैन ।
तर अमेरिकाकी एकजना युवतीले आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डलाई यतिधेरै माया गर्छिन् कि उनले प्रेमीको खुसीका लागि आफैले नयाँ गर्लफ्रेन्ड खोजिदिएकी छिन् ।
समाचार अनुसार ती युवतीले प्रेमीलाई निकै प्रेम गर्थिन् तर जागिरका कारण समय दिन भने सक्दिनथिन् ।
डेलीस्टारमा छापिएको खबर अनुसार चनेल बी नामकी युवतीले आफ्नो कथा सोसल मिडियामा राखेकी छिन् । ती युवतीले तीन वटा जागिर गर्दथिन्,जसका कारण उनले आफ्नो प्रेमीलाई समय दिनै सक्दिनथिन् र शारीरिक रुपमा पनि खुसी पार्न सकिरहेकी थिइनन् । तर शारीरिक सुखको कमीका कारण ब्वाइफ्रेन्डले आफूलाई नछाडोस् भन्ने उनको चाहना थियो ।
प्रेमीप्रतिको प्रेम र विछोडको डरका कारण उनले नयाँ उपाय खोजिन् र आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डका लागि एकजना नयाँ गर्लफ्रेन्ड बनाइदिइन् ।
अहिले तिनैजनासँगै बस्ने गरेको र निकै खुसी रहेको उनको दाबी छ । आफू र प्रेमीको बीचमा तेश्रो युवती आउँदा आफूहरुको सम्बन्ध टुट्नबाट जोगिएको उनी बताउँछिन् ।
हरेक दिन तीनवटा जागिर गरेर घर फर्किंदा ब्वाइफ्रेन्डसँग रोमान्स गर्ने समय आफूसँग नहुने र धेरै काम गर्ने हुनाले थकाइका कारण रोमान्सको इच्छा पनि नहुने उनको भनाइ छ । त्यसैले आफ्नो प्रेमीको खुसीको लागि उनी स्वयंले दोस्रो युवती खोजिदिइन् ।
ब्वाइफ्रेन्डसँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध नहुँदा झगडा हुन सुरु भएपछि उनलाई ब्वाइफ्रेन्डले आफूलाई छाडेर जाने हो कि भन्ने लाग्न थालेको थियो । अन्ततः आफ्नो प्रेमसम्बन्ध जोगाउनका लागि उनले यस्तो कठोर निर्णय लिएको बताएकी छिन् ।
मङ्गलबार ०४, माघ २०७८ ०८:५६ मा प्रकाशित
महिलाको गोप्य अंगमा चार वर्षदेखि अड्किएको थियो काँचको गिलास
जिभ्रोमा रौं पलाएपछि…
छात्राहरुले एक चुल्ठी बाट्दा केटाहरुमा उत्तेजना ! जापानी स्कुलमा लगाइयो अनौठो नियम
विषालु सर्प र बिच्छीको विशेष परिकार ! (भिडियो सहित)
एउटा मन्दिर : जहाँ कुमार केटाहरूले पार्वतीको मूर्ति चोर्छन्
यी हुन् संसारका सबैभन्दा कान्छा अर्बपति, ९ वर्षको उमेरमै अर्बौंको मालिक